E nwere ọtụtụ data nke na-abụkarị n'akụkụ nke ọzọ ihe HTML. Na igwe komputa, otu webpage bụ ngwakọta nke akara, ihe odide ederede, na oghere ọcha. Ihe anyị na-aga inweta na ibe weebụ bụ naanị ọdịnaya na ụzọ anyị nwere ike ịgụta. Kọmputa na-akọwapụta ihe ndị a dị ka mkpado HTML - curso fotografia artistica pdf file. Ihe kpatara ọdịiche dị na koodu ntinye site na data anyị na-ahụ bụ software ahụ, na nke a, ihe nchọgharị anyị. Ndị ọzọ na ebe nrụọrụ weebụ dị ka scrapers nwere ike iji echiche a iji wepu ọdịnaya weebụ ma chekwaa ya maka ojiji.